Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » I-Hawaii COVID-19 yeNqanaba loMngcipheko ukusuka ePhakamileyo ukuya kuPhakathi
uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Kamaainas • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
The Aloha Umbuso waseHawaii usukile kumngcipheko oPhezulu waya eMngciphekweni oPhakathi namhlanje kuluhlu loMthetho weCovid ngoku.
Iimeko ze-COVID-19 zaseHawaii, izibhedlele, kunye nokufa kuyehla kwinyanga ephelileyo.
Urhulumente wafikelela ekukhuseleni umhlambi ukuze kugonywe abantu abanokufumana idosi enye kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo.
Irhuluneli yaseHawaii uDavid Ige usacebisa ukuba uhambo lube nomda kuhambo olubonwa luyimfuneko.
Umthetho weCovid ngoku ubonelela ngemibala emi-5 yemingcipheko yomngcipheko yamazwe kunye neekota kulo lonke ilizwe ukuze abemi kunye namagosa aseburhulumenteni baqonde ngcono imeko ye-COVID kwindawo yabo. Umthetho wokuBumbana ngoku yi-501 (c) (3) ezimeleyo engenzi nzuzo esekwe ngamavolontiya ngo-Matshi 2020. Umthetho weCovid ngoku linyathelo elijolise kwi-COVID ukunceda abantu benze izigqibo ezinolwazi ngokubonelela ngexesha nangeenkcukacha ezichanekileyo malunga ne-COVID eMelika.
Kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo, Inani lamatyala eHawaii, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokufa kuyehla. I-Honolulu County, eHawaii, ixele ukuba neebhedi ze-ICU zabantu abadala eziyi-156. I-86 izaliswe zizigulana ezingezizo ze-COVID kwaye ezingama-33 zizaliswe zizigulana ze-COVID. Lilonke, i-119 kwi-156 (76%) igcwalisiwe. Oku kuphakamisa amandla athile okufumana ukonyuka kwamatyala e-COVID.
Urhulumente wafikelela ekukhuseleni umhlambi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngenqanaba lokugonya lama-73.9% yabemi abafumana idosi enye ubuncinci. KwiNqila yaseHonolulu, eHawaii, abantu abangama-720,162 (73.9%) bafumene idosi enye kwaye i-647,576 (66.4%) bagonyiwe ngokupheleleyo. Nabani na oneminyaka eli-12 ubuncinci unelungelo lokugonywa. Ngaphantsi kwe-0.001% yabantu abafumene idosi bafumana impendulo engalunganga.
Ngokomndilili, inqanaba losulelo kwezi ziqithi liku-69% ngenqanaba lokuvavanywa okuhle kwe-3%. Kungokunje kukho amatyala ama-7.3 amatsha axeliweyo kwi-100,000 nganye.
Isithili sase-Honolulu, eHawaii, sisesichengeni esiphantsi kunezithili ezininzi zase-US. Uluntu olunokuba semngciphekweni ophezulu lunezoqoqosho, intlalontle, kunye neemeko zomzimba ezinokuthi zenze kube nzima ukuphendula kunye nokufumana kwakhona kuqhambuko lwe-COVID.
Ukuhamba kusafanele kuthintelwe ngaphandle kokuba kukho imfuneko, okanye abahambi bagonywe ngokupheleleyo.
Iimaski ziyacetyiswa kubantu abagonyelweyo kwiindawo zangaphakathi zikarhulumente ukunciphisa ukusasazeka kokwahluka kwe-Delta. Abantu abangafakwanga ugonyo kufuneka baqhubeke nokuzifihla kuzo zonke iindawo zikawonke-wonke.
Iindibano zangaphakathi kufuneka zithintelwe nabantu abangaphandle kwekhaya, ngaphandle kokuba bagonyiwe ngokupheleleyo.
Izikolo zinokubonelela ngokukhuselekileyo ngokufunda ngaphakathi kumntu kuphela xa le milinganiselo yolawulo losulelo ikhona.